I-Vietnamization yeMfazwe yaseVietnam
Imbali kunye neNkcubeko IMfazwe yaseVietnam
Ukujongwa kwecebo likaNixon lokunciphisa i-United States ngaphandle kweMfazwe yaseVietnam
Ukukhankanywa phantsi kwesiqubulo esithi "Uxolo noHloniphe," uRichard M. Nixon wanqoba ukhetho lukazwelonke luka-1968. Isicwangciso sakhe sibizwa ngokuba yi "Vietnamization" yemfazwe echazwe njengendlela yokwakha ngokufanelekileyo inkqubo ye-ARVN ukuya kwinqanaba lokuba bangayitshutshisa imfazwe ngaphandle kosizo lwaseMelika. Njengengxenye yesi sicwangciso, amabutho aseMerika aya kususwa ngokukhawuleza. I-Nixon yazalisekisa le ndlela kunye nemizamo yokunciphisa uxinzelelo lwehlabathi ngokufikelela kwi-diplomatic kwi-Soviet Union kunye neRiphablikhi yabantu baseChina.
EVietnam, imfazwe yatshintshela kwimisebenzi encinci ejoliswe ekuhlaseleni izixhobo zokusebenza zaseNyakatho yeVietnam. Ukugqithiswa nguGeneral Creighton Abrams, abathatha isikhundla seGeneral William Westmoreland ngoJuni 1968, amabutho aseMerika aphuma kwindlela yokukhangela kunye nokutshabalalisa enye ekugxininiseni imizi yaseMzantsi Vietnam kunye nokusebenza nabantu basekuhlaleni. Ngokwenza njalo, kwenziwa imizamo emikhulu yokuphumelela iintliziyo kunye nengqondo yabantu baseMzantsi Vietnam. La maqhinga aye aphumelela ekuhlaselweni nasekugqibeleni.
Ukuqhubela i-Nixon ye-Vietnamization scheme, Abrams basebenze ngokubanzi ukukhulisa, ukuxhobisa, nokuqeqesha ama-ARVN. Oku kubonakala kunzima njengoko imfazwe yaba yintlanano eqhubekayo kunye ne-Amandla aseMelika yaqhubeka iyancitshiswa. Nangona le migudu, ukusebenza kwe-ARVN kwaqhubeka kuphazamiseka kwaye kudla ngokuxhaswa kwi-American inkxaso yokufumana iziphumo ezilungileyo.
Ingxaki kwi-Front Front
Ngoxa i-anti-war e-US yavuya kakhulu ngeenzame zikaNixon kwi-détente kunye neentlanga zama-communist, yavutha ngo-1969, xa iindaba zaqhekeka ngokubulawa kwabantu abangama-347 baseMzantsi Vietnam baseMelika baseMi Lai (ngoMatshi 18, 1968).
Ulwaphulo lukhula ngakumbi xa, emva kokutshintsha kwisimo seCambodia, i-US yaqalisa ukuqhuma amabhomu aseNyakatho yeVietnam ngaphaya komda. Oku kwalandelwa ngo-1970, kunye nemikhosi yomhlaba eyahlasela eCambodia. Nangona kuhloswe ukuphucula ukhuseleko lwaseMzantsi Vietnam ngokuphelisa ingozi emngceleni, kwaye ngoko ngokuhambelana nomgaqo-nkqubo we-Vietnamization, wawuboniswa esidlangalaleni njengokwandisa imfazwe kunokuba uphume.
Umbono kawonkewonke wanyuka phantsi ngo-1971 ngokukhutshwa kwePentagon Papers . Ingxelo efihlakeleyo, i-Pentagon Papers icacisa impazamo yaseMelika eVietnam ukususela ngowe-1945, kunye nobuxoki obucacileyo malunga neGulf of Tonkin Isiganeko , ukubandakanyeka ngokubanzi kwe-US ekufakeni iDiem, kwaye ibonakalise imfihlo yaseBamerica ibhomu laseLaos. La maphepha aphinde apepta indlela yokujonga inkolelo eMelika.
Naphezu kokungena eCambodia, i-Nixon iqalile ukuxothwa ngendlela echanekileyo yamandla ase-United States, ukunciphisa amandla empi ukuya kuma-156,800 ngo-1971. Ngaloo nyaka, ii-ARVN zaqala ukusebenza kwe-Son Son 719 ngenjongo yokuqhawula i-Ho Chi Minh Trail eLaos. Kwinto ebonwe njengokuhluleka okuphawulekayo kwe-Vietnamization, imikhosi ye-ARVN yaqhutyelwa yabuyiselwa kwimida. Ukuqhutyelwa kweminye iminyango yaboniswa ngowe-1972, xa iNorth Vietnam yaseNyakatho yaseNyakatho yaseMelika iqalise ukuhlasela okuqhelekileyo eMzantsi , ihlasele kumaphondo asekumantla nakwiCambodia. Ukuxhatshazwa kwaphela kwaphela ngenkxaso ye-airpower yase-US kwaye yabona ukulwa okunzulu malunga neQuang Tri, i-Loc ne-Kontum. Ukuxhatshazwa kunye nokuxhaswa yi-American aircraft ( Operation Linebacker ), amandla e-ARVN aphinda athathe insimu elahlekileyo ehlotyeni kodwa ixhaphaze kakhulu.
Imfazwe yaseVietnam: iMfazwe yaseIa Drang
Imfazwe yaseVietnam: iMfazwe yase Khe Khe
Imfazwe yaseVietnam: Ukuhlaselwa kwePasika
IMfazwe yaseVietnam: Ukuphela kweMbambano
Imfazwe yokuqala ye-Indochina: iMfazwe yaseDien Bien Phu
Indlela Yokuthengisa Iimidlalo zeBhodi yeMillion - Ukuba nguMyili weMidlalo yoMdlalo
Isiqingatha soBomi Isibonelo Ingxaki
Iingelosi zithandaza: Ukuthandaza ku-Gabriel omkhulu
Isikhokelo seBhayibhile seentsapho kubazali abangamaKristu
UMTHETHO Ulinganisa Ukwamkelwa kwiiYunivesithi zikaRhulumente eNyakatho Carolina
Imifanekiso yesiFrentshi ngeBouche